Pisa Pelle Italian Akpụkpọ anụ
Ejiri aka depụta ya na Tuscany, Italy
Zụta Akpụkpọ Akpụkpọ anụ Italia ndị dị ọnụ ahịa na Ahịa Akwa
Plọ ahịa ipigide akpa
Plọ ahịa Jirinụ akpa
Baglọ ahịa Akpa
Plọ ahịa Cross Isi
Zụọ akpa ụmụ nwoke
Plọ ahịa na-ejegharị ejegharị
Plọ ahịa Laptọọpụ akpa
Pisa Pelle nwere agụụ maka ejiri aka na ngwaahịa nka. Anyị nwere ndị omenkà kacha mma na Tuscany, Italy. Mpaghara Tuscany nke istali bụ obi na mkpụrụ obi nke mmepụta akpụkpọ anụ dị elu nke ụwa na ihe nzuzo azụmaahịa na-ebufe site n'ọgbọ.
Ihe Nzuzo Ezin’iru N’aga N’iru
Oge obodo na-ere ahịa, na-aga n'ihu ma na-agbanwe agbanwe na Medieval Italy bụ ebe zuru oke maka ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ na-agbawa. E guzobere Guild iji chebe usoro nzuzo eji emepụta akpụkpọ anụ mara mma na-enweghị oke n'ebe ndị ọzọ n'ụwa. A ka na-echekwa usoro ndị a ihe nzuzo ezinụlọ nke ọma, na-enyefe site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ na mpaghara e mepụtara akpụkpọ anụ kacha mma n'ụwa kemgbe ihe karịrị ọkara puku afọ. Taa, Italy dị ihe dịka 16% nke mmepụta akpụkpọ anụ ụwa na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke akpụkpọ anụ niile emepụtara na Europe.
Akụrụngwa dị elu na Ntị na Nkọwa
Ihe ndị a bụ njirimara, nke na-eme ka ihe ndị e kere eke bụrụ eziokwu ma bụrụ onye nnọchi anya ọrụ aka nke Tuscan.
Ihe kachasị mma nke ngwaahịa a bụ maka anyị nsonaazụ dị n'etiti ọdịnala na ụkpụrụ nke oge a.
Ọ bụ ebum n’uche anyị ịghọta ngwaahịa, nke na-egbo mkpa ejirimara nke ịba ụba na ergonomic.
Akpa Laptop Akpụkpọ anụ
Akpa kọmputa bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị, dịka mgbakwunye na PC nwere ike ịnwe akwụkwọ, akwụkwọ edemede na ihe ndị ọzọ achọrọ maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ. Bu ...
Mgbe ihu igwe na-ekpo ọkụ emesịa ma ụbọchị gafee, agba ọchịchịrị na-apụ n'anya, na-ahapụ ohere maka ụda olu na-egbukepụ egbukepụ, jikọtara ya na ike ...
Mpaghara akpụkpọ anụ na akpụkpọ ụkwụ dị na Tuscany bụ eziokwu dị mkpa mba ụwa, ọmarịcha ihe emere na ,tali, nke bụla…